नर्सको ब्यथा : रोजी भुषाल « Online Rapti
नर्सको ब्यथा : रोजी भुषाल
अनलाइन राप्ती | 6:18 PM
अबसर र चुनौति सगं सगैं भनिन्छ नर्स सेवा,र मानवतामा समर्पित पेसा हो । नर्सको गुरु जुन महान नर्स फ्लोरेन्स नाइटिंगेल एक चर्चित नाम हो । जसले बिरामीहरूको सेवालाई उनको जीवनको अर्थ, नर्सहरूको सेवा, र मानवतामा समर्पित मान्दछ । अस्पतालहरूले बिरामीहरूलाई नर्सहरूले दिएको सेवाले उनीहरूलाई रोगबाट मुक्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । रोजी भुसाल लाई सानै छदाँ देखि नै सेतो एप्रोन लगाएर अस्पतालमा बिरामीको सेवामा हेर्ने आमाबुबाको सपना थियो ।
महिलालाई संघर्ष गर्न धेरै कठिन छ । त्यसैमा नर्सिङ पेसा सुरुवात गर्नु अघि धेरै चुनौती, साहस र हिम्मतका साथ यो पेशामा छनोट गर्नु पर्छ । अहिले विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले आतंकित बनाइरहेको छ । हरेक महामारीमा निस्वार्थ भावनामा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर आफ्नो काम, धर्म र डिउटी सम्झेर आफ्नो जिन्दगीलाई तिलाञ्जली दिएर यस पीडा दायक समयमा नर्सहरु लडिरहेका छन् । फन्टलाइनमा, आइसोलेसन, आइसियु र ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझै पनि गुणस्तरी व्यक्तिगत प्रर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सामग्री प्रदान नभएको हुँदा मानसिक र शारिरिक रुपमै एक किसिमको डरले गर्दा मनोबल घटिरहेको छ । यस दुःखद घडिमा स्वास्थ्य क्षेत्र धेरैले संम्वेदनशील महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हो । त्यसैले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
यसरी पीडा लुकाएर भोको पेट मुस्कुराएर सेवा दिने पेशालाई छोरी बिग्रिए नर्स भन्ने शब्द कतिपयले समाजमा बुझिदिदाँ धेरै पीडा दायी हुन्छ?? त्यसैगरी कतिपयले नर्सलाई नर्स भनेको त डाक्टरको पछि पछि हिड्ने प्रेसर र ज्वरो नाप्ने मात्रै काम हो भनेर बुझ्नु हुन्छ । यदि डाक्टरले दिएको औषधि मात्र निको हुने भए किन हस्पिटलमा भर्ना गरेर नर्सको जिम्मामा राखिन्छ त ? सायद उहाँलाई थाहा भएन कि आधाभन्दा धेरै रोग नर्सीङ केयरले ठिक हुन्छ । हरेक स्वास्थ्यकर्मी समान रुपमा उपचार को लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । यसैपनि नारीहरु सहनशील र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता धेरै हुन्छ । त्यसैमा यो पेशाले थप सहनशील र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता धेरै हुन्छ । त्यसैले यस पेशाले थप सहनशील र जिम्मेवार सानै उमेरदेखि सिकाउँछ । आफ्नो आँसु लुकाएर हास्न र बिरामीको आशु पुछेर हसाउन सिकाउने नर्स नै हुन् । तर पनि कुनै सानो गल्ती हुँदा नर्स नै कुट्न्छिन् ।
यद्यपि बिरामीको रिपोर्ट समय कै नआउदाँ डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको गल्तिमा नि हामी नर्सले नै गालीको प्रहार चुप चाप सहनु पर्छ । मेरो अनुभवमा अझ धेरै अपहेलीत हुनु पर्ने त क्याबिनमा बस्ने बिरामी पक्षहरु देखि हुन्छ । प्रया क्याबिनमा बस्नेहरुले धेरै पैसा तिरेर बसेका छौँ, त्यसैले नर्सले हामीले जे भन्यो, त्यहि मान्नु पर्छ, भन्ने मनसाय हुदो रहेछ । उहाँहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत सुविधाको लागी धेरै पैसा तिर्नु हुन्छ । तर नर्सलाई दासी दासी जसरी काम लगाउन होइन । नर्सको लागि विरामी हस्पिटलमा आएपछि शारीरिक अवस्था हेरेर कस्तो विरामीलाई के–के नर्सिङ केयर दिने र कति समय सम्म सेवा दिने भन्ने हो ।
बिरामीको हैसियतले सेवा दिने काम होइन । प्राय बिरामी पक्ष र नर्समा आउने विषयहरु भनेको यस्तै कुरा र राम्रो बोलेन, नर्सहरु छुच्ची हुन्छन्, भनेर तथानाम गाली सुन्नु पर्छ । एक जना विरामी पक्षलाई एक पटक सोधिएको कुरा दोस्रो पटक सोध्न जादाँ उहाँहरु रिसाउँनु हुन्छ । तर हामी एक जना नर्सले कति धेरै विरामी सेवा बाहेक अरु थुप्रै कागजी काम गर्नुपर्छ । यहि भिडमा केही धेरै नै समझदार ब्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ । स– साना यस्तै थुप्रै कुराले डिउटीमा खटिएका नर्सलाई मानसिक तनाब भईरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विरामी पक्षले नर्सको पेशा बुझिदिनु भयो, भने डिउटीको समयमा काम गर्न धेरै नै सहज हुन्थ्यो ।”तर पनि हाम्रो सेवा निरन्तर एकोहोरो रुपमा चलिरहने छ ।